[Ankapobeny ] 12 Jiona, 2009 08:54
Tsy nahetsika ny miaramila
Nivoaka tampoka tao @ magro ny olona ary namonjy an'Ambohijatovo tamim-pilaminana. Hira vavaka horakoraka sy siotsioka no heno nanakoako eran'ny tanana omaly nanomboka t@ 12 ora no nianga teo @ magro ary tany @ 3 ora tany vao tonga teny Ambohijatovo. Azo sary an-tsaina ny hamaron'ny olona. Ho avy @ ora tsy ampoizina koa i dada raha ny fahitako azy.
sary vitsivitsy nangonina tany ho any! Ntsonale le zanak'i dada e! very lavitra ireo foza orana
Hipoka ambohijatovo!!! Miteny ho azy ny sary. Tapitra
[Ankapobeny ] 08 Jiona, 2009 09:55
Adinoko tanteraka ny fetin'ny reny
Tena mafy loatra ny ady @ fianinana an-davanandro e! Ka asa na noho izay no nanadinoko ilay andro ho an'ny neny omaly. Hitako nalahelo mihitsy i madama omaly satria na dia efa teny iarana aza ny anay ny oe tsy mandany vola @ fety mihitsy aloha isika @ ty taona ity fa mbola tsy hay izay hofisehon'ny ampitso dia adiko ny niarahaba aza omaly. Repotra t@ fiomanana ny ho any ampiangonana izahay ary mba niandry ahy hiarahaba izy kanjo indrisy!!! Ny antoandro avy nivavaka izahay vao niteny tamiko izy nanao oe:" Mba sambany aho vao lasa reny kanefa dia adinonao tanteraka" tena gina sy tsy nahateny ny anao lahy ary nitady hevitra hanarenana ny adisona.
Eny fa na dia ireo reny rehetra mpandalo eto @ blaogy koa ary dia adinoko ny nametra hafatra kely toy ny isan-taona miaraba azy ireo. Miala tsiny ry reto fa tena repotra mijery ny adin'i tgv sy ra8 ka lasa tena ohatrany entana mavesatra mihitsy izy ity marina.
Koa dia faly miarahaba anareo reny rehetra ary miala tsiny na somary tara aza.